गाउँमा मान्छे पोखरीमा डुबेको र चट्याङ लागेर मृत्यु भएको दोष दिँदै शिव मन्दिर परिसरमा महिलालाई कुटपिट गर्ने समाज कानुनसँग मात्र होइन, भगवान्सँग पनि डराएन
एउटी महिलालाई कुटेर, ढलाएर, विवश बनाएर मानव मलमूत्र खुवाएपछि गाउँको पञ्यायती रातको करिब १ बजे समापन भयो । तर, मूर्तिदेवी गम्भीर घाइते भएकी थिइन् । श्रीमान् र छोराले एम्बुलेन्स बोलाएर राति नै लहानस्थित कामना नर्सिङ होममा पुर्‍याए । ‘तर, चोट गम्भीर छ भनेर कामना नर्सिङ होमले यहाँ उपचार हुन नसक्ने बतायो । त्यसपछि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको छ, आमा बोल्न सक्नुहुन्न, अब एक–दुई दिनमा अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेको छ,’ छोरा गणेशको भनाइ छ ।
अन्याय परेकालाई गाउँघरमै न्याय दिन स्थानीय पालिकालाई कानुनले अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय गाउँपालिकाले यो विषयमा दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै पहल लिएको छैन । गाउँपालिका केन्द्रबाट जम्मा तीन किलोमिटरको दूरीमा रहेको कुर्सन्डी गाउँमा भएको यो घटनाको विषयमा जानकार भए पनि जनप्रतिनिधि भने औपचारिक जानकारीको पर्खाइमा छन् । घटनाको विषयमा न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शोभाकुमारी यादवले भनिन्, ‘घटनाबारे तेस्रो व्यक्तिहरूबाट थाहा पाएँ, पीडित र आरोपी पक्ष कसैले पनि लिखित निवेदन दिएका छैनन् । निवेदन नआएसम्म हामीले केही गर्न मिल्दैन ।’
कुटपिटबाट घाइते भएकी महिला अस्पताल भर्ना भएको एक सातासम्म पनि जनप्रतिनिधिले उनको स्वास्थ्य अवस्था र राहतको विषयमा समेत चासो राखेका छैनन् । गम्भीर घाइते महिला अस्पतालको बेडमा छिन्, परिवारका सदस्य उनको उपचारका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैँले चासो राख्नुपर्ने होइन र भन्ने नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहन यादवले भने, ‘गाउँघरमा यस्ता खालका झगडा, कुटपिट भइरहन्छन्, पीडितले नभनेसम्म कहाँ–कहाँ जाने ?’
घटनाको एक सातापछि आइतबार मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय महेशपुर पतारीले गाउँमा पुगेर घटनास्थलको प्रकृति मुचुल्का उठाएको छ, तर अहिलेसम्म कोही पनि पक्राउ परेको छैन । ‘आरोपितहरू अहिले फरार छन्,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहाका प्रवक्तासमेत रहेका डिएसपी शालिकराम पौडेलले भने ।
आठ महिनामा मात्रै मधेसमा १० महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार
१. ७० वर्षीया महिलालाई बोक्सी आरोपमा कुटपिटपछि गोबर खुवाउने प्रयास
२. बोक्सी आरोपमा कुटपिट, तर प्रहरीले लकडाउन भन्दै उजुरी नै लिएन
३. बोक्सीको आरोपमा महिलामाथि कुटपिट : सरकारी वकिल कार्यालयको आदेशमा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेन
४. प्रहरीले मुद्दा त दर्ता गर्‍यो, तर दोषीलाई पक्राउ गरेन
५. गाईवस्तुलाई बोक्सी लगाएको भन्दै कुटपिट
जलेश्वरीले बोक्सी लगाएर आफ्नो घरका मानिस र गाईवस्तु बिरामी भएको भन्दै कुटपिट र दुर्व्यवहार गरिएको थियो । पीडितले २३ फागुनमा इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा हुलाकमार्फत उजुरी दिएकी थिइन् । तर, दोषीहरू अहिलेसम्म पक्राउ गरेका छैनन् ।
६. बोक्सी लगाएर बाख्रा मारेको भन्दै कुटपिट
७. बोक्सी आरोपमा कुटपिट, कुटपिट गर्ने आठ महिनादेखि फरार
८. बोक्सी आरोपमा कुटपिट गर्ने २५ हजार धरौटीमा रिहा
९. बोक्सीको आरोपमा कुटपिट
१०. सिरहाको नवराजपुर–५ कुर्सुन्डीनिवासी मूर्तिदेवी यादवमाथि बोक्सीको आरोपमा कुटपिट
बोक्सी बकाउन मध्यरातमा मन्दिरमा पञ्चायती : कुटपिट गरी मलमूत्र खुवाइएकी महिला अस्पतालमा । गाउँमा मान्छे पोखरीमा डुबेको र चट्याङ लागेर मृत्यु भएको दोष दिँदै शिव मन्दिर परिसरमा महिलालाई कुटपिट गर्ने समाज कानुनसँग मात्र होइन, भगवान्सँग पनि डराएन । नयाँ पत्रिकाबाट साभार !